Voka-pifidianana ofisialy: hiatrika fihodinana faharoa Rajoelina sy Ravalomanana | NewsMada
Voka-pifidianana ofisialy: hiatrika fihodinana faharoa Rajoelina sy Ravalomanana
Efa nampoizina? Tsy mifankaiza firy amin’ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Ceni, ny 17 novambra, izay nambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), teny Ambohidahy, omaly. Araka izany, hatao amin’ny 19 desambra ho avy izao ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa. Hifampitana amin’izany ny kandidà Rajoelina Andry sy ny kandidà Ravalomanana Marc.
Tsy niova firy ny vato azon’ireo kandidà
Tsy niova firy ny vato azon’ireo kandidà tsirairay avy. Vato 1 949 851 (39,19%), ohatra, ny azon’ny kandidà voalohany nahazo ny isam-bato be indrindra, navoakan’ny Ceni, 1 954 023 (39,23%) no nambaran’ny HCC. 1 755 885 (35,29%) ny vato azon’ny kandidà manaraka, Ravalomanana Marc, navoakan’ny Ceni, 1 760 837 (35,35%) ny an’ny HCC.
Saika tsy miova firy toy izany avokoa ny an’ireo kandidà sisa rehetra. 439 837 (8,84%) ny vato azon’ny kandidà fahatelo, Rajaonarimampianina Hery, navokan’ny Ceni, 439 837 (8,84%) ny an’ny HCC. Tsy nanova firy ny voka-pifidianana ankapobeny ny fiovan’ny tarehimarika vitsivitsy tetsy sy teroa.
Misy elanelana 50 509 mpifidy voasoratra anarana
Raha 9 898 544, ohatra, ny mpifidy nisoratra anarana navoakan’ny Ceni, 9 949 083 ny an’ny HCC. Misy elanelana 50 509 izany. 5 367 671 ny mpifidy nandatsa-bato navoakan’ny Ceni ary 54,23% ny taham-pandraisana anjara, 5 367 550 ny an’ny HCC ny mpifidy nandatsa-bato, ary 53,95 % ny taham-pandraisana anjara.
392 863 (7,32%) ny vato fotsy sy ny vato maty ary 4 975 018 (92,68%) ny vato manankery navoakan’ny Ceni, raha 386 946 ny vato fotsy sy ny vato maty ary 4 980 604 ny vato manankery nambaran’ny HCC. Tsy nanova na inona na inona amin’ny voka-pifidianana ankapobeny ny elanelana isa tetsy sy teroa.
Tsy nanova inona ny “logiciel” samy hafa
Tsy nanova inona izany ny fampiasan’ny HCC “logiciel” hafa no ho ny an’ny Ceni. Toy izany koa ny amin’ny firaketana an-tsoratra (PV) izay samy nanana ny azy roa tonta. Tsy nitondra fiovana inona koa ny amin’ireo fitoriana miisa 212. Tsy noraisin’ny HCC ny ankaramaroan’ireo fitoriana; na nisy vitsivitsy noraisiny aza, saika tsy nitombina avokoa. Hisy ve ny fahamatorana sy ny fifampitokisana kokoa amin’ny fikarakarana sy ny fikirakirana fifidianana amin’ny fihodinana faharoa?